January 30, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Inter Milan oo garoonkeeda Giuseppe Meazza guul weyn kaga gaartay kooxda Benevento… +SAWIRRO
Cayaaraha January 30, 2021
(Milano) 31 Jan 2021. Inter Milan ayaa garoonkeeda Giuseppe Meazza guul weyn kaga gaartay kooxda Benevento, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Inter Milan. Daqiiqadii 7-aad Inter Milan ayaa hoggaanka u […]Sii akhriso
Kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Emirates… +SAWIRRO
(London) 30 Jan 2021. Kooxaha Arsenal iyo Manchester United ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Emirates, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 0-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ayeey labada kooxood Arsenal iyo Manchester United ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu soo Sii akhriso
Juventus oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Sampdoria oo ay booqatay… +SAWIRRO
(Sampdoria) 30 Jan 2021. Juventus ayaa saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Sampdoria oo ay ku booqatay garoonka Stadio Luigi Ferraris, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Talyaaniga. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Juventus. Daqiiqadii 20-aad Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Inter Milan iyo Benevento ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey
(Milano) 30 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Inter Milan iyo Benevento ee horyaalka Serie A ayaa la shaaciyey Kooxda Inter Milan ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Benevento si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
Levante oo guul ka soo gaartay Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano… +SAWIRRO
(Madrid) 30 Jan 2021. Levante ayaa guul ka soo gaartay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano, kaddib markii ay kag soo adkaatay 1-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qaybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah. Daqiiqadii 9-aad daafaca kooxda Real Madrid ee […]Sii akhriso
Man City oo guul ay u baahneyd kaga gaartay kooxda Sheffield United garoonkeeda Etihad… +SAWIRRO
(Manchester) 30 Jan 2021. Manchester City ayaa guul ay u baahneyd kaga gaartay kooxda Sheffield United garoonkeeda Etihad, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hare ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa Manchester City. Daqiiqadii 9-aad kooxda Manchester City ayaa hoggaanka Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(London) 30 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Manchester United horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Arsenal ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester United si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha […]Sii akhriso
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Dhallinyarada oo qalab Isboorti kala wareegay Midowga Yurub “SAWIRRO”
Soomaaliya January 30, 2021
MUQDISHO-(SONNA)-Wasiiru dowlaha Wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa maanta qalab isboorti kala wareegay xafiiska Taliska guud Midowga Yurub ee Soomaaliya . Wasiiru dowlaha ayaa hoosta ka xariiqay in qalabkan isboorti loogu talagalay naadiyayaasha heerarka kala duwan ee dalkeena . “Waxaan Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Sampdoria iyo Juventus ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey
(Sampdoria) 30 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Sampdoria iyo Juventus ee horyaalka Serie A ayaa la shaaciyey Kooxda Sampdoria ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Juventus si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Sampdoria […]Sii akhriso
MUQDISHO-(SONNA)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tixgalinaya xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka iyo baahida loo qabo in la gudagalo qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey waxaa uu soo saaray go’aanadan: 1- Madaxweynuhu wuxuu shir iskugu yeerayaa madaxda Dowlad Goboleedyadda dalka iyo Gobolka Banaadir. Sii akhriso